WARBIXIN Mbappe, Bruno Fernandes & Bale Oo Hogaaminaya Xiddigaha Ku Fashilmay Euro 2020. – Kooxda.com
HomeEURO 2020WARBIXIN Mbappe, Bruno Fernandes & Bale Oo Hogaaminaya Xiddigaha Ku Fashilmay Euro 2020.
WARBIXIN Mbappe, Bruno Fernandes & Bale Oo Hogaaminaya Xiddigaha Ku Fashilmay Euro 2020.
June 30, 2021 Abdiwali Adan Jamac EURO 2020, Wararka Maanta, Warbixino 0
Waxa la marayaa meel xasaasi ah oo tartanka Euro 2020 ah waxana jira xiddigo is muujiyay tartanka iyo kuwo si weyn ugu fashilmay in ay si fiican u ciyaaraan.
Waxa jira xiddigo wax weyn laga filayay ka hor intii uuna bilaaban tartanka Euro 2020 laakiin xiddigahaas ayaa si weyn u fashilmay iyaga oo soo bandhigay qaab ciyaareed aad u xun.
Hadaba waxa aan warbixintan ku soo bandhigi doonaa xiddigaha ku fashilmay Euro 2020:
Xiddigan ayaa yimid tartanka iyada oo wax weyn laga filayo kadib markii uu qaab ciyaareed heer sare ah soo bandhigay koobkii adduunka oo ahaa tartankii ugu weynaa ee uu kala qayb galay xulkiisa.
Laakiin xiddiga reer France ee da’yarka ah ayaa si weyn ku fashilmay in uu wax saamayn ah sameeyo isaga oo xitaa la siiyay qiimayntii ugu xumayd xiddigaha xulka France ee tartanka Euro 2020.
Xiddiga reer Portugal ayaa fure u ahaa kooxda Man United waxana uu noqday xiddiga dhanka kale u rugay qaab ciyaareedka Red Devils isaga oo kooxdiisa u dhaliyay wax ka badan 27 gool tartamada oo dhan waxana laga filayay in uu dhabarka ku qaado xulkiisa sida Man United.
Laakiin Fernandes ayaan soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga filayay waxana uu u fashilmay si weyn isaga oo xitaa booskiisa ka waayay xulka kulamadii ugu dambeeyay.
Waa xiddig kale oo si gaar ah isha loogu hayay markii uu Felix imanayay tartanka Euro 2020 gaar ahaan in uu door weyn ka qaatay ku guulaysiga Atletico Madrid ee horyaalka La Liga.
Laakiin xiddiga ayaan ka mid ahayn qorshaha Tababaraha Portual waxana uu ciyaaray kaliya daqiiqado yar isaga oo aan soo bandhigin qaab ciyaareed fiican.
Bale ayaa ahaa xiddiga rajada u ahaa xulka qarankiisa tartanka Euro 2020 laakiin Bale ayaa is qariyay markii uu xulkiisu aad ugu baahnaa isaga oo ku fashilmay in uu qaab ciyaareed fiican ku hogaamiyo kooxda.
Inkasta oo uu goolal caawiye ka noqday hadana Bale ayaa ka khasaariyay rikoodhe sidoo kale waxa uu ku fashilmay in uu xulkiisa ku hogaamiyo wareega 8 dhamaadka tartanka.
5.Matthijs de Ligt:
Waa xiddig kale oo la filayay in uu soo bandhigo qaab ciyaareed fiican laakiin xiddiga Matthijs de Ligt ayaa kaadh cas ku dhamaystay tartanka Euro kadib markii kaadhka tooska ah loo taagay kulankii uu xulkiisu kaga hadhay tartanka Euro 2020.
WARBIXIN: Messi & Ramos Oo Hogaaminaya Xiddigo Bilaa Koox Noqon Doonta Maanta
XASAASI: Rashford Oo Xaqiijiyay Saxiixa Ugu Horeeya Ee Ay Man United Samayn Doonto